बोक्रामा कालो दाग हुने गरेको पाकेको केरा खानुभएको छ ? के हुन्छ यस्तो केरा खादा ? जान्नुहोस - ज्ञानविज्ञान
केरा खानुका २० फाइदा :’
केरा स्वादिष्ट फल मात्र होइन यसले औषधिको रुपमा पनि काम गर्छ । यसकाे नियमित सेवनबाट स्वास्थ्यसम्बन्धी कतिपय राेगबाट बच्न सकिन्छ ।मुटुसम्बन्धी समस्यादेखि मासिक धर्मको अनियमिता , छाती पोल्ने, कब्जियत र शरीरका अन्य स्वास्थ्यसम्बन्धित समस्या समाधानका लागि केरा निकै उपयोगि मानिन्छ । केरा सेवनबाट तत्कालै उर्जा मिल्छ ।
त्यही भएर जोकोहीले पनि कमजोरी महशुस गर्ने वित्तिकै केरा खान सल्लाह दिन्छन् । खानासँगै वा खाजाको रुपमा केरा सेवन गर्न सकिन्छ । केरामा पोटासियमको मात्रा धेरै हुने हुँदा यसले रक्तचाप घटाउनका साथै शरीरमा तरल पदार्थको सन्तुलन नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । केराले हड्डी बलियो मात्र बनाउँदैन डिप्रेसनबाट मुक्त गर्छ ।
दिनमा २ वटा केरा खानुका यी १२ फाइदा :
धेरै मात्रामा अल्कोहल पिएपछि, यदि तपाइँको टाउको दुखिरहेको छ भने, एक गिलास बनना सेक पिउनुस ।
यसमा केही मात्रामा थोरै मह पनि मिसाउनुस । केही बेरमा तपाइँको ब्लड शुगर लेभल ठीक हुन थाल्दछ र ह्याङ्ओभर पनि टाढा हुन्छ । यति मात्र हैन, यसले त्यसको शरिर पनि हाइड्रेटिड हुन्छ ।
Don't Miss it कति खाने कार्बाेहाइड्रेट स्वस्थ्य रहन ?
Up Next दुब्लो भएका कारण चिन्तित हुनुहुन्छ ? यस्तो छ घरेलु विधिद्वारा मोटाउने तरिका